Conversocial: Nzira Yako Yemagariro Media Vatengi Sevhisi | Martech Zone
Conversocial: Nzira Yako Yemagariro Midhiya Vatengi Sevhisi
Chishanu, May 10, 2013 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Makambani akawandisa anotangisa zvirongwa zvavo zvemagariro kunze kwedhipatimendi ravo rekushambadzira pasina hurongwa hwezvinhu zvevatengi. Vatengi havana basa nekuti iwe uri pasocial media yekushambadzira… ivo vanongoda zvavo nyaya dzebasa revatengi dzinotarisirwa. Zvinosemesa ndezvekuti hurombo hwevatengi hwekupindura hunoparadza magariro enhau kushambadzira zvachose.
Conversocial Icho chinangwa chakavakirwa pasocial vatengi sevhisi, ichipa isina musono kufambiswa kwebasa ine yakasimba uye yakatarisa maficha.
Akangwara Kukoshesa - Conversocial prioritization injini inoshandisa mutauro wechisikigo kugadzirisa uye kuongorora kweakaitika mhinduro kuona kuti unokwanisa kubata nezvakakosha kune vatengi vako, kutanga.
Proactive Vatengi Sevhisi Channel - svikira kune yega yega inosimudzira nyaya yevatengi. Conversocial inokubatanidza iwe ku Twitter firehose, ichipa yakanangwa dhata iyo yakanyatso kubatanidzwa mune isina musono, yakatarwa kufambiswa kwebasa.
Kubudirira Kunoita - Conversocial inopa chimiro kune vezvenhau manejimendi manejimendi, ine Yekutanga Inbox yemashoko akakosha. Kukurumidza uye nyore kugadzirisa meseji kunoreva kuti nepo kudyidzana kwese kuchionekwa, hapana nguva inopambadzwa.
Nhaurirano Nhoroondo - Chengetedza nhaurirano dzichimhanya zvakanaka nehukama hwakazara hwekudyidzana kweumwe neumwe vateveri vako nevateveri. Hazvina mhosva kuti ndiani anotora nyaya, mamiriro azere aripo ipapo.
Kubatana Routing - Kubatana kufambiswa kwemabasa kunoita kuti iwe ugovane ruzivo nekukurumidza, uye gadzira mabasa kune vamwe. Isa mutengi wako mukubata nemunhu chaiye, uye neruzivo ruzivo.
Tags: Mabatiro evatengiFacebookevanhu vezvenhauSocial Media MarketingTwitter
5 Matekiniki Ekuunza Emai Eko kuHupenyu
Kugadzirisa Google Analytics